राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको नाफा कस्को कति ? - Arthapage
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको नाफा कस्को कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको नाफाको वृद्धिदर वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा ७।७८ प्रतिशतले बढी रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुको चैत मसान्तसम्म २.६५ प्रतिशत खुद नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढाएका थिए, भने १० वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले १०.४३ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएका हुन् ।
चैत मसान्तसम्म १० वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु मध्ये ३ वटा बैंकको खुद नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ, भने ७ वटा विकास बैंकको नाफा बढेको छ । नाफा घटाउने विकास बैंकमा देव विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंक रहेका छन् । बाँकी ७ वटा विकास बैंकको नाफा चालु आवको चैत मसान्तमा १।६२ प्रतिशतदेखि ५२।७७ प्रतिशतसम्म नाफामा वृद्धि भएको छ ।
बैंकद्वारा सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार राष्ट्रिय स्तरका १० वटा विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी नाफा मुक्तिनाथ विकास बैंकले गरेको छ । बैंकले चालु आवको तेस्रोे त्रैमासमा गत आवको सोही अवधिमा भन्दा ८।०६ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ४ लाख रुपैयाँले नाफामा वृद्धि गर्दै ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा ३२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा गरिमा विकास बैंक बढी नाफा कमाउने बैंकको दोस्रो नम्बरमा सुचीकृत भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ कमाएको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा नाफामा १४।७६ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ३८ लाख रुपैयाँले वृद्धि गरी ४९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको हो । सो अवधिमा बैंकको ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वितरण योग्य नाफा रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ३७ करोड ४९ लाख नाफा गरेको लुम्बिनी विकास बैंकले चालु आव सोही अवधिमा १६।७० प्रतिशतले नाफामा वृद्धि गरी ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा भन्दा समीक्षा अवधिममा ६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको हो । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा १० करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आवको दोस्रो त्रैमासबाट राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको रुपमा स्थापित भएको साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले चैतमसान्तसम्म नाफामा अन्य ६ वटा पुराना राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पछि पारेको छ । बैंकले चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा नाफामा ४०।४८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । गत आवको चैत मसान्तमा बैंकले ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफामा १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप गरी चालु आवको सोही अवधिमा ४३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको हो । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासमा २८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको ज्योति विकास बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा नाफामा ५२।७७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकले गत आवको चैत मसान्तमा आर्जन गरेको नाफामा १५ करोड ६ लाख रुपैयाँले बढाएर ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकको वितरण योग्य नाफा ९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले गत आव चैत मसान्तको भन्दा २।४३ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा ३८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकले उक्त नाफामा ९४ लाख रुपैयाँले बढाएर चालु आवको सोही अवधिमा ३९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको हो । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा गण्डकी विकास बैंकले चालु आवको तेस्रोे त्रैमासमा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५।३३ प्रतिशतले नाफा घटाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा २ करोड ८ लाख रुपैयाँले नाफा घटाएर ३६ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको हो । सो अवधिमा बैंको वितरण योग्य नाफा ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा देव विकास बैंकको खुद नाफा चालु आवको सोही अवधिमा १९।४९ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको चैत मसान्तमा २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नाफा घटाएर २३ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा नाफा सीमित गरेको छ । उक्त अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आवको तेस्रोे त्रैमासमा २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफा कममाएको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा नाफा ७।६८ प्रतिशत अर्थात १ करोड ८६ लाख रुपैयाँले नाफा बटाएको हो । सो अवधिमा बैंकको वितरण योग्य नाफा ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा कम नाफा आर्जन गर्ने कामना सेवा विकास बैंक हो । गत आवको तेस्रोे त्रैमासमा २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा नाफा १।६२ प्रतिशतले वृद्धि गरी २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । सो अवधिमा बैंकले नाफामा ३४ लाख रुपैयाँ थप गरेको हो । चैत मसान्तसम्म बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रकाशित मितिः 4:42:22 PM |
Prevखजुरामा पहिलो पटक एक जनामा कोरोना संक्रमण देखियो, नरैनापुरमा ५ जना नयाँ थपिए
Nextनेपाल बैंकले गत चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा दुई प्रतिशतले छुट दिने